एक सफल ग्लोबल फ्रेंचाइजी को लागी6शीर्ष सुझावहरु Franchiseek
»सफल वैश्विक फ्रन्चाइजीका लागि top शीर्ष सुझावहरू
त्यसोभए, तपाईं एक ग्लोबल मास्टर फ्रन्चाइजी सुरू गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? त्यसोभए त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईंले पहिले विचार गर्नुपर्दछ। व्यवसाय विश्वकोश सन्दर्भका अनुसार, नयाँ फ्रान्चाइजी विश्वभरि प्रत्येक आठ मिनेटमा खुल्छ। फ्रान्चाइजरको रूपमा ग्लोबल बजारमा प्रवेश गर्दा, त्यहाँ भेट्न अझ धेरै प्रतिस्पर्धा छ।
यस पोष्टमा, हामी ग्लोबल फ्रेंचाइजी संसारमा सफलताका लागि केहि शीर्ष सुझावहरूको बारेमा हेर्नेछौं, र कसरी तपाईं ती परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेंचाइजी अवसरहरू सबै समावेश को लागी एक लाभदायक व्यवसाय मा।
ग्लोबल फ्रेंचाइजी भनेको के हो?
अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेंचाइजीका रूपमा पनि परिचित, ग्लोबल फ्रेंचाइजीले विदेशी बजारमा ब्यापार ढाँचाको नक्कल गर्ने अधिकारको बिक्रीलाई जनाउँदछ। फ्रान्चाइजरले उक्त व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दिएका छन र उनले फ्रान्चाइजीलाई उत्पादन वितरण गर्ने र कम्पनीको बौद्धिक सम्पत्ती अधिकारको प्रयोग गरी स्थापना गर्न शक्ति दिनेछ।
२०१ 2018 मा, restaurant%% सबैभन्दा ठूला २०० रेस्त्रां फ्रान्चाइजरहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गरिरहेका थिए। बजार छिटो बढिरहेको छ र एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मा आफ्नो ब्रांड उपस्थिति बढाउन एक अवसर संग व्यवसाय प्रस्तुत गर्दछ।
फ्रान्चाइजी र फ्रान्चाइजरको घनिष्ट सम्बन्ध छ किनकि फ्रान्चाइजीले फ्रान्चाइजरलाई बिक्री र विज्ञापन शुल्क सहित बिभिन्न शुल्कको सेट दिन्छ। तपाईं प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र मास्टर फ्रेंचाइजी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्झौताहरू र एक अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेंचाइजी सम्झौता सामान्यतया उनीहरूको संचालनलाई नियन्त्रण गर्दछ।
1। तपाईंको अनुसन्धान गर्नुहोस्
जब यो एक ग्लोबल बजारमा विस्तार गर्न आउँदछ, तपाईंले यसलाई नयाँ उद्यमको रूपमा व्यवहार गर्नु आवश्यक छ। स्थानीय रीतिथिति र स्वादको बारेमा अनुसन्धान गर्नुहोस्, देशको रोजगार कानून र मानव संसाधन मार्गदर्शनको बारेमा पत्ता लगाउनुहोस्, र निर्धारित गर्नुहोस् जहाँ तपाईंको फ्रान्चाइजीको लागि उत्तम स्थान हुनेछ।
उदाहरण को लागी, बेलायत मा ranch०% फ्रेंचाइजी स्वामित्व र देश भित्र विकसित गरीन्छ। के यो केस अरु ठाउँमा छ? फ्रान्चाइजीहरू विश्व बजारमा तपाईंको उद्योगमा कहाँ सबैभन्दा सफल भएको छ?
तपाईंको सम्भावित विस्तार क्षेत्रहरूमा अन्य फ्रन्चाइजीहरू अनुसन्धान गर्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस् कि कुनले सफलता देख्यो। यदि बजार पहिले नै सन्तुष्ट छ भने, उदाहरणका लागि, त्यहाँ पहिले नै फिटनेस फ्रान्चाइजीहरू हुन सक्छ यस क्षेत्रमा, त्यसपछि अन्यत्र हेर्न सक्नुहुनेछ उत्तम स्थान पाउनका लागि।
२. उत्तम किसिमको सम्झौता तोक्नुहोस्
वैश्विक फ्रान्चाइजीले कि त प्रत्यक्ष र मास्टर सम्झौताहरूको उपयोग गर्न सक्दछ, तपाईंले निर्णय गर्नु आवश्यक छ जुन कुन तपाईंको कम्पनी मोडेलको लागि उत्तम हो।
प्रत्यक्ष फ्रेंचाइजी सम्झौताहरूमा फ्रान्चाइजर र प्रत्येक फ्रैंचाइजी एकाईको अपरेटरको बीचमा सम्झौता समावेश हुन्छ। यस प्रकारको व्यवस्थाले फ्रान्चाइजरलाई प्रत्येक विस्तारमा बढी नियन्त्रण प्रदान गर्दछ, तर यसले घरको आधारका लागि बढी काम गर्न सक्दछ।
यसैबीच, मास्टर फ्रान्चाइजीहरूले फ्रान्चाइजर र अर्को पार्टी बीचमा एउटा सम्झौता बनाउँछन् जुन उनीहरूलाई दिइएको क्षेत्र भित्र उप-फ्रान्चाइजी प्रदान गर्दछ। जबकि यसले भर्तीलाई अधिक महँगो बनाउँदछ, यस मोडेलले थप आम्दानी उत्पन्न गर्न सक्छ।
A. स्थिर सम्बन्ध बनाउनुहोस्
एकचोटी तपाईले प्रयोग गर्न चाहानुभएको करारको प्रकार निर्धारण गरेपछि, एक फ्रान्चाइजी भेट्टाउनुहोस् जो तपाईको व्यवसायको लागि फाइदादायी छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं आफ्नो खाद्य फ्रान्चाइजी को विस्तार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, नलम्बन फ्रेंचाइजी मा कसैको काम गर्ने तपाईंको विस्तारको सफलता दर असर गर्न सक्छ।
तपाईं दुईजना सम्भवतः छुट्टै देशहरूमा काम गर्ने हुनाले तपाईंले नजिकको सम्बन्ध सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यस तरिकाले, तपाइँ एक देश-द्वारा-देश आधारमा ग्लोबल फ्रेंचाइजी को सफलता को निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ।
Plans. योजनाहरु लाई कार्यमा राख्नुहोस्
तपाईंको योजनाहरू गतिमा पाउँदै सफलताको लागि तपाईंको मार्ग सुरू गर्नुहोस्। धेरै फ्रन्चाइजी व्यवसायमा, सही उत्तर छैन, केवल एक विस्तार योजना जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ। लचिलो हुनको लागि सम्झनुहोस् जब तपाईं आफ्नो ग्लोबल फ्रेंचाइजी लागू गर्नुहुन्छ ताकि तपाईं नयाँ चुनौतिहरूको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। केवल नयाँ फ्रन्चाइजीहरू खोल्नुहोस् जहाँसम्म तपाईंको वित्तीयले अनुमति दिन सक्छ।
Your. तपाईको मार्केटिंग अनुकूलन गर्नुहोस्
जुन देशहरू तपाई विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको ज्ञानको प्रयोग गरेर तपाईको मार्केटि strate रणनीतिहरूलाई नयाँ विस्तारको स्थानीय क्षेत्र अनुकूल गर्न सार्थक हुन्छ। तपाईको व्यवसायको उपस्थिति ठोस बनाउन स्थानीय जडानहरू स्थापना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए, अखबारहरूमा विज्ञापनहरू दिनुहोस्, ग्राहक प्रशंसापत्र माग्नुहोस् र एक सामाजिक मिडिया रणनीति सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ। तपाईको फ्रेंचाइजी को आकार को आधार मा, निर्धारित गर्नुहोस् कि कसले विश्वव्यापी मा मार्केटिंग को लागी उत्तरदायित्व लिन्छ।
One. एक कदम अगाडि रहनुहोस्
यो महत्त्वपूर्ण छ कि एक पटक तपाईंको व्यवसाय सकियो र चालु भयो, तपाईंले अझै पनि स्थानीय प्रतिस्पर्धा र विश्वव्यापी बजारमा एक नजर राख्नुहुन्छ। उद्योग विज्ञ, शन केली, हाइलाइट गर्दछन् कि 'केहि फ्रन्चाइजी चेनहरूमा 80०% देखि 90 ०% सम्म असफलता दर हुन्छ, जबकि अरुसँग लगभग कुनै असफलता हुँदैन'। यी तथ्या .्कहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको साथ एक विविध फ्रन्चाइजी उद्योगको परिणाम हो, त्यसैले तपाईंको फाइदाको लागि तपाईंको व्यवसाय फ्रेंचाइजीका फाइदाहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
यदि तपाईं ग्लोबल फ्रेंचाइजीको बारेमा बढि सल्लाह खोज्दै हुनुहुन्छ वा बिक्रीमा उत्तम फ्रन्चाइजीहरू ब्राउज गर्न चाहानुहुन्छ भने फ्रान्चिसेक अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेंचाइजी निर्देशिका तिम्रो लागि ठाउँ हो।